कोविड–१९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मित्रराष्ट्र चीन केही समययता आक्रान्त छ । कोरोनाका कारण हालसम्म २ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
हुवानबाट शुरू भएको कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । कोरोना भाइसर अन्यत्र नफैलियोस् भन्नका लागि चीनले सुरक्षाका कनेकन उपाय गरिसकेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि चीनले १ हप्तामा १ हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नेदेखि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको मित्रराष्ट्र चीनलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालको संसदमा उठ्यो ।
संसदमा आवाज उठेपछि सरकारले चीनलाई १ लाख मास्क पठायो । रातारात करोड मास्क बनाउन सक्ने र हप्तादिनमै हजार शय्याको अस्पताल बनाउने क्षमता भएको चीनको लागि १ लाख मास्क ठूलो कुरा भएन । ठूलो कुरा त मित्रता थियो, नेपालले प्रदर्शन गरेको ।
नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धमा ६ दशकमा चीनले नेपाललाई सहयोग मात्र गरिरहेको छ । ५ वर्ष अगाडिको विनाशकारी महाभूकम्पमा गरेको मानवीय सहयोग तथा पुनर्निर्माणमा उसले देखाएको तत्परता प्रशंसायोग्य छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा चीनले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन ।
नेपाल–चीन सम्बन्धमा राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यक्त सद्भाव स्मरण गर्न सकिन्छ । ‘चीन र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध भएको आधा शताब्दीभन्दा बढीको अवधिमा २ देशले छिमेकी मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विषम नमूना पेश गरेका छन । मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई के भन्न खोजेको हुँ भने चीन र नेपालको बीचमा केही समस्या छैन, मित्रता मात्र छ,’ नेपाल भ्रमणको क्रममा सीले भनेका थिए ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलाई हरतवरले सहयोग गर्नु छिमेकी राष्ट्रको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ । कोरोनाको प्रकोपबाट चीनले छिट्टै मुक्त भयो भने नेपालमा चिनियाँ पर्यटक आउने विश्वास गरिएको छ ।
विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रको छवि बनाएको चीनले गर्ने आर्थिक प्रगति नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा आधार बन्न सक्छ ।
अस्वाभाविक गठबन्धन होइन, पार्टीमै सहमति गरेर सत्ता ...
आज नेकपा सचिवालय बैठक : लिखित धारणा पेश गर्ने ओली–प्रचण्डको तयारी
भारतमा चर्किँदै किसान आन्दोलन, कृषि कानुनको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अवार्ड फिर्ता गर्दै
तालखर्कलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयास
संकटमा राना समुदायको मौलिक पहिरन
कर्णलाई संसारकै महादानी किन भनिन्छ ?
बहुमुखी व्यक्तित्व पालिखे : जता हात हाल्यो, त्यतै सफल !
शरीर स्वस्थ राख्न नियमित खानुहोस् यस्ता खानेकुरा